Tunisia adume nezivakashi zethu, ngakho kulesi sihloko sizoxoxa omunye amahhotela ayo - Le uMongameli Aquapark 3 *.
Le uMongameli Aquapark 3 * - leli hhotela umnotho, etholakala kule ndawo esenyakatho resort of Hammamet. Lesi sakhiwo sinamagumbi eyodwa izakhiwo elinezitezi ezinhlanu futhi Bungalows ukuthi sizungezwe ingadi enhle. Ihhotela lakhiwa ngo-1985, ngo-1995 kwenziwa umsebenzi wokuvuselela izakhiwo zalo, futhi ukulungisa zokugcina wenziwa ngo-2010.
Ihhotela itholakala amakhilomitha ayisithupha kusukela maphakathi Hammamet. Lugxile iholidi lomkhaya. Sekukonke, ihhotela oluthatha indawo 50,000 square metres.
Le uMongameli Aquapark 3 * inikeza 216 amakamelo e isakhiwo main (ezinhlanu storey) futhi 170 zokuhlala, owawuseduze Bungalow. Zonke amakamelo ngocingo, yokugezela, i-TV, umshini wokomisa izinwele, air conditioning. I zokuhlala phakathi esakhiweni eyinhloko uzokubonisa izindawo kolwandle noma engadini.
Kulo lonke elakwa ka ezimbili storey Bungalows, ezinye zazo zingabantu kungaphelele kude isakhiwo main nolwandle. Inzuzo enkulu ezifana amaphakheji elincane ukuthula ngoba kukhona ibanga kusuka isikhungo ophithizelayo eyinkimbinkimbi.
Le uMongameli Aquapark 3 * linikeza izivakashi zayo Zonke womanyano. Ihhotela has imigoqo eziningana nezindawo zokudlela, esebenza cuisine Tunisian ngamazwe.
Yokudlela main ivuliwe "lezitsha". Isidlo sasekuseni sihlanganisa omelet, amaqanda, amasosishi imifino steamed, ushizi, ayi, ushizi, imifino, ukudla kwasekuseni okusanhlamvu. Ekuseni yokudlela ukhonza ehla esiphundu (isib croissants). Njengoba for iziphuzo, ungakwazi ukuthatha abilisiwe itiye, ukhokho, ikhofi, ayo encibilikayo.
Kwasemini kanye dinner, unikeza ezihlukahlukene enkulu izitsha: izinhlobo eziningana isobho, inkukhu, isibindi, tuna kanye nezinye izinhlanzi, inyama yenkomo, duck, amazambane, i-pasta, imifino steamed, izitsha kazwelonke (Couscous, njll), amasaladi, imifino slicing, iminqumo, pizza. Iziphuzo zikhishwa emini futhi kusihlwa kuphela bar. Lokhu iwayini, ubhiya, Sprite, Fanta, Coke. Zonke endaweni ekhiqizwa utshwala, kodwa asezingeni elifanele. iwayini Tunisian zinhle, ungakhetha emhlophe, pink noma obomvu. Ibha ikhonza cocktail, okuyinto ngokuvamile okulungiselelwe ngesisekelo "Buch" likagologo wendawo.
Yokudlela main ikhonza izithelo: ikhabe, ikhathalophu, amapetshisi.
Ihhotela "uMongameli" (Tunisia) has a nengqalasizinda ezinhle. insimu yalo siphela uhlobo lwemali. Noma kunalokho, imali dinars sendawo kungenziwa umklomelo ngesikhathi edeskini reception uma ufuna ukundlulisa izimali ezisele ekupheleni iholide futhi kumadola noma euro, ke kungenziwa kuphela esikhumulweni sezindiza, ngakho izivakashi ubazi ukuncoma ekushintsheni tibalo ezincane kuphela. Ensimini ka UMongameli Ihhotela 3 * (Tunisia), mini emakethe, isipho esitolo, ubucwebe esitolo, Boutique nge every little thing kwezivakashi.
Ihhotela likuvumela yokupaka khulula izimoto, ungakwazi ukuqasha imoto. I wamukelekile edilini ubusuku nemini. Ihhotela ungakwazi pre-oda ukudluliswa. Ihhotela "uMongameli" (Tunisia) alamukeli izivakashi ezifuywayo. Kukhona endaweni okugcinwa kuyo izimpahla kanye ikamelo ngokusebenza elondolo, ihholo inkomfa abantu ibhizinisi. Ngo-Igumbi safes ziyatholakala imali.
Hotel Le uMongameli Aquapark 3 * selikhanyise amachibi ezintathu, enye yazo izingane. Kukhona amanzi amaslayidi. Abobulili eyinkimbinkimbi kuyinto epaki amanzi, okuyinto ungasebenzisa abakhileyo yehhotela. ukuvakashelwa ezimbili khulula kunikeziwe izivakashi ngasinye. Abenzi be-animation nsuku ukufundisa amakilasi e-aqua-aerobics echibini ongaphandle. Ngaphezu kwalokho, izivakashi ungakwazi ukujabulela windsurfing, amanzi polo, Ukushushuluza amanzi.
Hotel le uMongameli Aquapark 3 * selikhanyise spa ayo, lapho ungakwazi ibhekane ukubhucungwa umzimba kanye nezinye izindlela zokwelapha kahle. Ehhotela kukhona izinwele nobuhle salon. Ihhotela has a emini nantambama ukuzijabulisa, okuhlelwe iqembu intsha. Kusihlwa, club ebusuku, lapho izivakashi bamenyiwe eziyinkimbinkimbi hhayi kuphela, kodwa futhi abantu bendawo, kuhlanganise kule ndawo yokudlela ethandwa kakhulu. Izivakashi ungakwazi ukujabulela umdlalo we imicibisholo, mini-football, amabhiliyade, volleyball, table tennis, igalofu mini, imidlalo Igumbi kanye ithenisi enkantolo.
Ngu isicelo edilini lomshado ngoba zonke comers zingahlelwa okwesikhathi ogibele Imali ngamahhashi ikamela. Seduze yegalofu, okuyinto abalandeli ungakwazi ukujabulela lo mdlalo.
le uMongameli Aquapark 3 * (Tunisia) has pool yezingane ahlukene sika. An on-site mini-club for izivakashi omncane. Kukhona ebaleni lokudlala yezingane. Ithimba izithombe ezijabulisayo izivakashi hhayi kuphela abadala kodwa futhi izingane. Esikhathini emini ngoba izingane ihlelwe imicimbi yezemidlalo, futhi kusihlwa bangalindela fun mini-disco. ukuzijabulisa Active opopayi aphethwe ngenkathi ephezulu kuphela.
le uMongameli Aquapark 3 * (Tunisia, Hammamet) yakhiwe ogwini, okuyinto inzuzo yayo esemqoka. Ibanga kusuka emzimbeni ebhishi esingaphansi engamakhulu amamitha. Ukuze uthole ebhishi, kufanele kokuwela umgwaqo ukuthi egobhoza ulwandle. Kepha abakhileyo Bungalow, kuyodingeka kaqale ensimini ngaphambi kokuba afinyelele ogwini. Konke kuncike indawo izakhiwo. Bungalows chithi saka endaweni.
Ihhotela lolwandle has a ikhava encane sandy, misa kolwandle engajulile futhi elula, ungasho esihle ngisho, okuyinto ekahle kakhulu izingane. Ogwini, kukhona izambulela futhi ilanga loungers. Ngenkathi okusezingeni eliphezulu kukhona ibha esesikhundleni iziphuzo ezibandayo.
Hammamet kuyinto resort owaziwa ngokuba emabhishi ayo amahle kanye best izikhungo thalassotherapy. He kubhekwa ahlonishwa kakhulu phakathi kwezinye e Tunisia. Izivakashi uthande resort ngenxa yethuba ukujabulela kokubili iholidi beach, ukuthola inkambo anti ukuguga-ukwelashwa bese nijabula.
Le ndawo resort ibanga amakhilomitha 14 ngasogwini. Hammamet ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: Hammamet Sud (isifunda esiseningizimu) kanye Yasmine-Hammamet (entsha izivakashi wesifunda). I lasendulo izivakashi ndawo adume futhi kuletha engenayo ezweni eside. Hammamet yasungulwa eminyakeni engaphezu kwengamakhulu amahlanu edlule. Kusukela ezikhathini zasendulo, yokungcebeleka kuthandeka kubantu. Futhi manje nakhu yakhiwe eziningi zonke izinhlobo amahhotela, eziningi zazo has a level amane noma aphambili. Kukhona futhi ezintathu-star izindawo. The yokungcebeleka ine ingqalasizinda esihle, okuyinto izivakashi eziningi.
Hammamet kubhekwa amahle kakhulu futhi green resort endaweni Tunisia.
Ukuphumula endaweni yokulala, kufanele nakanjani agqashule ekusebenzelaneni kolwandle futhi ubone izinto zendawo. Qiniseka ukuba udabule leli Medina ubudala futhi uvakashele Ribat, okuyizinto ogwini. Ayikho ezithakazelisayo kancane kuba Museum of umlando Hammamet.
Port ne enhle igama Marina iyona enkulu kunazo zonke e North Afrika. Kulapha kuvela endaweni entsha resort of Yasmine Hammamet, elakhiwa ngo isitayela ubudala.
Izivakashi ngokuqinisekile kuyoba ezithakazelisayo ukuze enyuka ensimini yendlu futhi ingadi Georga Sebastiana. Inxuluma Yakhiwa, sizungezwe nomsayipuresi izihlahla. Ensimini iyona yemidlalo nge izakhiwo zesimanje, okuyinto ubambe yonyaka International Ubuciko Festival.
Cishe njalo ehhotela e Hammamet ukuhlela uhambo Tunisia, enhlonhlweni ye Cap Bon, ezincithakalweni waseCarthage kanye Sahara. Umuzi ine kunepaki Carthageland, okuyinto has ezikhangayo eziningi abadala kanye nezingane. The yokungcebeleka Ubuye eziningana eziphambili emhlabeni igalofu, i-zoo, a esikhungweni sokushwibeka kanye abalandeli ogibele club.
Nakuba Hammamet resort kuyinto olandelanayo ezingaphezu kuka Sousse, kumane nje akunakwenzeka ukuba uthole nesithukuthezi. Fans of nightlife bayokwazisa disco zone, etholakala imizuzu eyishumi kusukela Jasmina. Lapha, ezitaladini eziningana zonke izindawo ethandwa kakhulu the resort, kanye imigoqo kanye zokudlela. Phakathi ema-disco edume kakhulu kubhekwa Oasis.
le uMongameli Aquapark 3 *: Izibuyekezo ngo-2016
Ukukhuluma ehhotela, ngifuna ukuxoxa izivakashi impendulo abavakashele ke ngo-2016, ukuze unombono mayelana nesimo sezindaba okwamanje. le uMongameli Aquapark 3 * (Hammamet) libhekisela isabelomali hotel izakhiwo. Itholakala endaweni enkulu, kwesokudla ogwini. Ihhotela has a endaweni kahle esikhulu futhi ezungezwe ingadi esikhulu ezishisayo. Isakhiwo uyashiywa endleleni ogwini. Umzimba main liseduze kakhulu ebhishi ukuze uthole kuso, ukuba umuntu amane nje kokuwela umgwaqo. Ngokusho holidaymakers ukuhlala isakhiwo main kuyinto elula kuzo zonke izici, kodwa, ngeshwa, kuba umsindo kakhulu. Emini, eziningi abantu ngasechibini futhi kusihlwa kufika umculo elikhulu livela nightclub elise Esitezi. Ngakho-ke, labo abakhetha indawo sikhululeke kakhudlwana, kungcono ukuba ukhethe Bungalow. Basuke kulo lonke elakwa, kodwa ngenxa yokuthi ezinye baye ogwini.
Ihhotela has a amachibi ukubhukuda zezingane kanye omdala, eduze kwayo ifakwe endaweni zihlalo. Kukhona inani elanele emphemeni izihlalo, zonke isikhala esanele. Ikakhulukazi ekhoneni kuyinto ulwandle emangalisayo.
Ihhotela uMongameli 3 * selikhanyise amakamelo ngempela ivulekile. Ifenisha kuzo akuyona entsha, kodwa zisesimweni esihle. isimo isabelomali Thobekile alichaza ezingeni ehhotela. Zonke amafulethi exhunywe ohlelweni olulodwa of air conditioning, engesiyo elula kakhulu izivakashi umbono, ngoba akunakwenzeka ukuba ulungise lokushisa oyifunayo. Selineni kanye amathawula usumdala futhi kudingeke okunye okusha. izinga yokuhlanza incike nezincekukazi ngokwabo. Abanye bahlanza kahle ngisho ngaphandle ithiphu, kanti eyesibili - ngisho ne izinga abampofu imali ibhonasi. Ukushintsha amathawula zenzeka cishe nsuku zonke, kodwa kuyaqabukela ukushintsha embhedeni.
Amandla - lena enye yezinkinga ezinkulu ukuthi izivakashi isithakazelo. Lokho ukudla okuningi izingxabano phakathi izivakashi. Ngalo mqondo, ke iyathinteka kanye "uMongameli" ihotel (Tunisia). "Izinkanyezi 3" - lena indlela enhle kulabo abafuna ukuthola othile ngemali ephansi ikamelo evamile futhi ukudla isilinganiso. Nokho, akubona bonke okulindele ifinyelelwe. Izibuyekezo ngo-2016 mayelana ukudla ephikisana kakhulu, ngokungafani kuya eminyakeni eyedlule. Kucatshangwa ukuthi umnotho, okuphathelene zonke izindawo zebhizinisi ehhotela.
Baningi izikhalazo ngalo ngokuya ezithweni yokudlela main. Isakhiwo uthatha eziningi izivakashi, oweta akakwazi ukubhekana yobuningi bomsebenzi, nakuba kuba ezivivinya kakhulu. Ngezinye izikhathi, basuke nje awunaso isikhathi ukuhlanza konke kahle. Ukuziphekela ngokuvamile ngempela okuhle. Isidlo sasekuseni sihlanganisa izinto okuphekiwe, kanye zonke izakhiwo. Ukuze sedina kwasemini kukhona ezihlukahlukene izitsha. Kukhona inyama, inhlanzi, futhi inkukhu. Izithelo etafuleni ngokuvamile has amakhabe. Ihhotela ibhalwe namakhekhe emangalisayo. Usebenzela ekuseni (donuts, croissants nokunye okunjalo. D.) Futhi yokudlela main, futhi ngemva kokudla kwakusihlwa (at 16:00) kwelinye nemigoqo. Kwasemini kanye dinner uyena onikezwa isobho. yogurt simnandi kakhulu futhi cottage shizi.
imenyu yezingane ahlukene sika, cha, kodwa phakathi ukudla okuthengiswako, ungahlala ucoshe okuthile ukuze ingane. Ngokuvamile, ukudla akukubi, bakubheka njengobuthakathaka ezingeni inkanyezi ezintathu, izivakashi kuphela ingamjabulisi emigqeni okuphakade yokudlela esidlweni.
Ethonya jikelele ihhotela
Ihhotela ukuphumula abantu abavela emazweni ehlukene kakhulu. Ngaphambili, eyinkimbinkimbi iye igxile baseYurophu, zazo kwakukhona 90%, Russian ufikile mncane impela. Ngo-2016, ukubuyekezwa izivakashi, iningi izivakashi - kuba nabantu base-Algeria, abasakwazi eziningi. Akuwona wonke amaholide kuthiwa aneliseke endaweni yawo.
Phakathi isizini okusezingeni eliphezulu izithombe eziyinkimbinkimbi kakhulu. Izingane ngenkuthalo ukubungaza izivakashi, wokuhlela imisebenzi ogwini futhi kuleyo nsimu. Very interesting kusihlwa imibukiso kanye disco for the kids. Njengoba thina sekuphawuliwe, ihhotela unensimu enkulu, lapho kukhona ngezizathu eziningi ezemidlalo. Futhi, ihhotela inezidingo spa isikhungo yayo nge ububanzi ezinhle amasevisi. Noma ungavakashela epaki amanzi. Ihhotela has a club nobusuku ngenxa bendawo, kodwa izivakashi ibuye usivakashele.
ukunakekela okukhethekile unikezwa lolwandle Le uMongameli Aqua 3 * Ihhotela. Izibuyekezo zezivakashi ukuthi babeshaye esikhonkosini. Beautiful olunesihlabathi sea enhle efudumele uyakwazi ekunqobeni izivakashi. Isakhiwo ine lolwandle ayo ogwini. It has ilanga loungers nezambulela. Ngenkathi okusezingeni eliphezulu, ogwini ukuphumula egcwele, futhi lonke isikhathi lapha ngempela ngokukhululekile.
Ngesikhathi sebehlezi ogwini, inikeza imisebenzi amanzi olwandle. Ngezinye izikhathi ebethelwa ulwelwe ogwini, kodwa lokhu akuphazamisi ukuphumula. Ngesikhathi sebehlezi ogwini ke okwamanje isethwe okuthunyelwe komsebenzi wamaphoyisa.
Abasebenzi hotel neze ukhuluma Russian. I reception imali eyengeziwe kungadingeka lapho usufika kuleyo ndawo, uma nihlabela inombolo ungathandi. amadola Twenty ungakwazi ukuxazulula inkinga ekutholeni ngokunethezeka. Abasebenzi hotel uzama kanzima, kodwa akusho ngaso sonke isikhathi wakwazi ukubhekana kangcono nale inani elikhulu lezivakashi.
Le uMongameli - Ihhotela eyamukelekayo isihambi isabelomali. Kuyinto izivakashi efanelekayo enesizotha bayathanda ukuba eduze kolwandle futhi ufuna ngenani enengqondo ukuze uthole okukhulu lolwandle iholide. ulwandle Warm namabhishi amahle - yilokhu okudingayo ukuze iholidi ezinhle.
Amahhotela e Chelyabinsk: izithombe isilinganiso. Emahhotela aphambili e Chelyabinsk
Ihhotela kleopatra Ada Ihhotela 4 * (Alanya, Turkey): incazelo, ezokungcebeleka kanye nokubuyekeza
Ecosol Houria Palace 4 *. Tunisia amaholide. Ecosol Houria Palace Ihhotela 4 *
Umlando Ukukhangisa Agencies
Ubisi Fried. Recipe Spain libalele
Indlela ukubamba perch e JIG ebusika? Jig ukudoba ebusika perch
Kata Beach SP House 3 Ihhotela (Phuket): incazelo, izithombe kanye nokubuyekeza
"Ismizhen": imfundo, analogs kanye nokubuyekezwa of odokotela
Umdlavuza wesibeletho: izimpawu zesifo
Galeopsis abavamile: incazelo kanye ayelapha